सम्पादकीय – २ : सरकार ! कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने ठोस योजना खै ?
माघ ११, २०७६ ००:५६ मा प्रकाशित
चीनको युवान क्षेत्रमा देखा परेको नोवेल कोरोना भाइरस तिब्रगतिमा स्थानान्तरण भइरहेको तथ्य तीन दिनको अवधिमा सार्वजनिक भएका समाचारहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालको उत्तरी भूभाग जोडिएको छिमेकी देश चीन कोरोना भाइरसको उद्गम थलो भएका कारण पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहने नै भयो । नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा चीन पुग्ने छात्रछात्राको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको छ र उनीहरूको निर्वाध आवतजावत चलिरहेको छ । चीनको युवान क्षेत्रबाट नेपाल आएका एक नेपाली छात्रमा कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि समेत भइसकेको छ ।
हामी भिजिट नेपाल २०२० को घोषणासँगै लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने राष्ट्रिय अभियानमा जुटेका छौँ । नेपालमा धेरै पर्यटक आउने देश मध्ये हाम्रै छिमेकी चीन दोस्रोमा पर्दछ । चीनको युवान शहरमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा चीनले उच्च सतर्कता अपनाउँदै युवान शहर र अरु स्थान बीचको यातायात सेवा वन्द गरिसक्यो । नयाँवर्ष लगायतको ठूलो समूह एकत्रित हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्न निर्देशन दिइसक्यो ।
सिंगापुरमा समेत चीनको यात्रा गरी फर्केका एकजना नागरिक संक्रमित भएको पुष्टि हुनासाथ प्रधामन्त्री लुङले टेलिभिजन मार्फत सम्वोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रमा थप संक्रमण हुन नदिन अन्य देशहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनमा जनस्वास्थ्य संकटकाल देखिए पनि र विश्वका अरु देशमा आत्तिनु नपर्ने भने पनि चीन र नेपालमा आवत–जावत हुने भएकाले नेपाल स्वयमले नै पहलकदमी लिनुपर्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न क्षमताले भ्याएसम्म लाग्ने जानकारी दिँदै अन्य व्यक्तिलाई सर्न नदिनका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको पनि बताउनुभयो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख विवेककुमार लालले महाशाखाले भाइरस नियन्त्रणको लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ८ जना स्वास्थ्यकर्मी खटाएर परीक्षण भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । तथापि संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस योजना बनिसकेको कुुनै सङ्केत उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा पाउन सकिएन ।
नेपालमा समेत कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा जंगली तथा घरेलु पशुपन्छीहरूसँग असुरक्षित सम्पर्कवाट टाढा रहने भनिए तापनि हालसम्म नेपाली विमानस्थल हुँदै चीन, थाइल्याण्डबाट कुकुर, विरालो लगायतका जनावर आउन रोकिएको छैन । अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबाट पशु क्वारेन्टाइनसँग कुनै पनि सहकार्य भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । यस बारेमा ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखासँग जिज्ञासा राख्दा यो त कृषिले हेर्ने हो भन्ने जवाफ दिएर पन्छिएको पाइयो । आम नागरिकले यस्ता गैरजिम्मेवार निकायहरूबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न कस्तो पहलको अपेक्षा गर्ने ?
विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म १७ जनाको मृत्यु भइसकेको र ५ सय ८१ जनामा भाइरस पोजेटिभ देखिएको पुष्टि भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालले उच्च सतर्कता सहित जोखिमको चुनौती सामना गर्नु आवश्यक रहेको जनाइसक्दा पनि अहिलेसम्म हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले यसवारे जनतालाई ढुक्क हुने गरी केही भन्न सकेको छैन । संसदीय समितिहरूले पनि यस विपदको बारेमा कुनै चासो लिइरहेका छैनन् । विमानस्थलमा सामान्य चेकजाँच गर्र्दैमा त्यहाँबाट संक्रमण रोकिन्छ ? संक्रमण लिएर विमानस्थलसम्म मानिस आएका रहेछन् भने के हुन्छ ? आफ्ना नागरिकलाई संक्रमित स्थानमा नजान अपिल गर्नु पर्दैन ? अनि संक्रमित स्थलबाट नेपाल आउन वा जान निरुत्साहित गर्ने पहल हुनु पर्ने होइन र ? प्राप्त भएका सूचना लुकाउने, सरकारी निकायहरूकै बीच आवश्यक समन्वय नहुने, मेरो वा तेरो क्षेत्र भनेर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति किमार्थ पनि जनउत्तरदायी हुन सक्दैन ।
आम जनताको जीवनसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सरोकारको यस सवालमा सरकारले यथासमयमै सतर्कता नअपनाउने हो भने ठूलो विपत निम्तिन सक्छ । सरकारी निकायहरू बीच तत्काल एकीकृत योजना बनाई कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न पहल हुनु आवश्यक छ । हेक्का रहोस्– आगो लागिसकेपछि मात्र इनार खन्ने तयारी गर्दा जनधनको अपूरणीय क्षतिलाई नत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, न त रोक्न नै सकिन्छ ।